शिखर र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता कति फाइदामा ? – Insurance Khabar
शिखर र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता कति फाइदामा ?
प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १४:३३
शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निस्काशन गर्ने दुई निर्जीवन बीमा कम्पनी हुन् । शिखर इन्स्योरेन्सले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ५५० रुपैयाँ प्रिमियम थपी प्रति कित्ता ६५० र प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १०० रुपैयाँ अंकित मुल्यमा ६९९ रुपैयाँ प्रिमियम थपी प्रति कित्ता ७९९ एफपीओमा निक्स्काशन गरेको थियो । सो एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता अहिले फाइदामा छन् ? इन्स्योरेन्स खबरले गरेको अध्ययन
शिखर इन्स्योरेन्सले २०७२ मंसिर १७ गते देखि १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ५५० रुपैया प्रिमियम थपी प्रति कित्ता ६५० मा थप सार्वजनिक निस्काशन गरेको थियो । कुल बजारमा शिखर इन्स्योरेन्सको बजार मूल्य निकै माथि पुगेको भए पनि अहिले कम्पनीको बजार मूल्य भने ८५१ रुपैँया रहेको छ ।
एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले प्रति कित्ता ६५० लगानी गरेको र त्यसपछि लगातार ३ वर्ष सम्म आएको बोनस शेयर बाट थपिएको शेयर कित्ता र बजार मूल्य ८५१ हुनुले शिखरको एफपीओमा लगानी गरेका लगानीकर्ता मालामाल भएको प्रस्ट हुन्छ ।
एफपीओ पछि कम्पनीले २४ प्रतिशत बोनस शेयर, ६० प्रतिशत बोनस शेयर र २९ प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गरेको छ ।
एफपीओमामा १० कित्ता शेयर पाउने लगानीकर्ताको अहिले शेयर संख्या २६ पुगेको छ । बजार मूल्य ८६१ लाई आधार मान्दा अहिले २६ कित्ता शेयरको बजार मूल्य २२ हजार ३६ आउँछ । त्यो बेला १० कित्ता एफपीओको लगानी जम्मा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।
यसरी आजको दिन सम्म आउदा शिखर इन्स्योरेन्सको एफपीओमा १० कित्ता शेयर पार्ने लगानीकर्तालाई १५ हजार ५ सय ३५ रुपैया नाफा भएको देखिन्छ ।
यता प्रमियर इन्स्योरेसले पनि एफपीओ बिक्री गरेको थियो । प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १०० रुपँैया अंकित मुल्यमा ६९९ रुपैयाँ प्रिमियम थपी प्रति कित्ता ७९९ मा थप सार्वजनिक निस्काशन गरेको थियो ।
एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ७९९ प्रति कित्ता लगानी गरेको र त्यसपछि १ वर्षकोे बोनस शेयर बाट थपिएको शेयर कित्ता र बजार मूल्य ९९४ हुनुले शिखरको एफपीओमा लगानी गरेका लगानीकत फाईदा मै भएको प्रस्ट हुन्छ ।
एफपीओमामा १० कित्ता शेयर पाउने लगानीकर्ताको अहिले शेयर संख्या ११ पुगेको छ । बजार मूल्य ९९४ लाई आधार मान्दा अहिले ११ कित्ता शेयरको बजार मूल्य १० हजार ९ सय ३४ आउँछ । त्यो बेला १० कित्ता एफपीओको लगानी जम्मा ७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ थियो ।
यसरी आजको दिन सम्म आउँदा प्रमियर र इन्स्योरेन्सको एफपीओमा १० कित्ता शेयर पार्ने लगानीकर्तालाई २ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ नाफा भएको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा दुवै इन्स्योरेन्स कम्पनीमा एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता नोक्सानीमा छैनन् ।